Ceni : “Azo aato ny ben’ny Tanàna tsy manao ny asany” | NewsMada
Ceni : “Azo aato ny ben’ny Tanàna tsy manao ny asany”
“Anisan’ny tena tsara homarihina ary lalàna izay tsy nisy teo aloha ny hoe: raha ohatra ka misy ny ben’ny Tanàna tsy hita eo amin’ny toeram-piasany na tsy mandray ny asany na tsy manao ny adidiny mandritra ny fotoana maharitra, azon’ny mpanolotsaina atao ny mangataka ny fampihantonana izany ben’ny Tanàna izany amin’ny asany.”
Io ny fanazavan’ny filoha lefitry ny Ceni, Rakotonarivo Thierry, ny fandraisan’ny ben’ny Tanàna amin’izao fe-potoam-piasana vaovao izao. Raha misy ben’ny Tanàna voasazin’ny lalàna amin’ny fitsarana, azo atao koa ny mampihantona izany ben’ny Tanàna izany amin’ny asany, ary mety hitarika amin’ny fanonganana azy amin’ny toerany izany. Toy izany raha misy koa ben’ny Tanàna tsy mandefa ny didim-pitondrana na ny fanapahan-kevitra raisiny rehetra ny amin’ny solontenam-panjakana mba harahi-maso.
Raha misy ny ben’ny Tanàna tsy mahafa-po ny mpanolotsaina ny fanatanterahana ny fanapahan-kevitry ny mpanolotsaina, zon’ny mpanolotsaina ny mandray fanapahan-kevitra amin’ny fampiatoana na fanesorana ny ben’ny Tanàna amin’ny asany. Misy tokoa ary olana mateti-pitranga eny anivon’ny kaominina izay tsy fanatanterahan’ny ben’ny Tanàna ny fanapahan-kevitry ny mpanolotsaina izay, araka ny nambarany.
Tena hisy àry ve ny fanajana sy fampiharan-dalàna amin’ireo ben’ny Tanàna tsy manao ny asany, indrindra amin’ny fanatanterahana fanamby? Mangetaheta ary efa maika amin’ny fampandrosoana mivantana sy mivaingana ny vahoaka ifotony.